एक जनाले १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका मात्रै नयाँ नोट पाउने, कुन–कुन ठाउँबाट पाइन्छ ? – ताजा समाचार
एक जनाले १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका मात्रै नयाँ नोट पाउने, कुन–कुन ठाउँबाट पाइन्छ ?
काठमाण्डौ – यस पटकको दशैँमा एक जना व्यक्तिले १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका मात्रै सुकिला तथा नयाँ नोट पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सूचना निकालेर असोज १० गतेदेखि १७ गतेसम्म नयाँ तथा सुकिला नोट वितरण गरिने जनाएको छ । एक जनाले पाँच, दश, बीस, पचास र एक सयका एक–एक बन्डलका दरले १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका नोट साट्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग नेपालगञ्ज, पोखरा, धनगढी, विराटनगर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र जनकपुरबाट नोट साट्न सकिने जनाएको छ । काठमाण्डौमा भने राष्ट्र बैंकका साथै सबै सरकारी बैंकका शाखाबाट नयाँ नोट लिन सकिनेछ ।
साथै निजी क्षेत्रका विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नयाँ नोट उपलब्ध गराउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकको सूचना
टिका लगाई दक्षिणा दिँदा पूजा आजा गर्दा वा अद्दय कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्य गर्दा रंग लागेका वा मैलिएका हातहरुले नोटहरु छुँदा त्यस्ता नोट चलनचल्तीमा आउन नसक्ने भएको हुँदा त्यस्तो कार्य नगरौं/ नगराऔं । आफूलाई आवश्यक भन्दा बढी रकम बै‌कमा जम्मा गर्ने बानी बसालौं । नोट राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यसको हिफाजत गरौं ।
साथै, नेपाली नोटमा कुनै पनि बहानामा रंग लगाउने, लेख्ने, केरमेट गर्ने, नोटको आकार बिगार्ने जस्ता कार्य गरी नेपाली नोटको दुरुपयोग गर्ने / गराउने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सर्वसाधारणमा सूचित गरिएको छ ।